Khine Han Ni Myint@scarlet annie's Page - Myanmar Network
Khine Han Ni Myint@scarlet annie
Khine Han Ni Myint@scarlet annie's Likes
Khine Han Ni Myint@scarlet annie's Friends
Khine Han Ni Myint@scarlet annie's Discussions
Started this discussion. Last reply by Khine Han Ni Myint@scarlet annie May 16, 2013.3Replies7Likes
“ ကလောင် ကလောင် ကလောင်” ကျောင်းဆင်းခေါင်းလောင်းသံ ကြားမိတိုင်း အရင် မူလတန်း မှသည်အထက်တန်း ကျောင်းသား ဘ၀ ကို တမ်းတ လွမ်းဆွတ်မိလေသည်။ တစ်ခါတစ်လေ ကျောင်းသားဘ၀ ကို တစ်ပတ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်…Continue
ကျွန်တော် ဂျီပီ (၁၃)
Started May 10, 20130Replies2Likes
ယခုတလော လူနာ အတော်ပါးသည်။ မိုးတွင်းမို့လို့ လူနာ များသည်မထင်လိုက်လေနှင့်။ မိုးရွာလျှင် ဘယ်လူနာမှ ထီးဆောင်းပြီး ဆေးခန်းမလာ။ ဆေးမြီးတို နှင့်အိမ်ထဲတွင် စောင်ခြုံကွေးနေသည်က များသည်။ ကိုယ်တွေလဲ…Continue
ကျွန်တော် ဂျီပီ (၁၂)
Started May 10, 20130Replies3Likes
ဒီနေ့ ဒေါက်တာပွ ဆေးခန်းသို့ စောစောလာခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာ Moriamine Drip သွင်းရန် လူနာတစ်ယောက်နှင့် ချိန်းထားသောကြောင့်ပင်။ Moriamine ဆိုသည်ကား ဒေါက်တာပွ ဆေးခန်းဖွင့်သော ရပ်ကွက်လေးတွင် လာသွင်းသူက…Continue
ကျွန်တော် ဂျီပီ (၁၁)
Started this discussion. Last reply by sikedeveechan May 15, 2013. 1 Reply3Likes
ဒေါက်တာပွ တွင် အစွဲတစ်ခုရှိသည်။ ထိုအရာမှာ နေရာ အစွဲ။ ဆိုကြပါစို့ ဘောလုံးပွဲ တစ်ပွဲတွင် ကိုယ်အားပေးသော အသင်း ကန်နေလျှင် ထိုအသင်း ဂိုးရဖို့ အရေး ဒေါက်တာပွ မှလည်း အပြင်မှနေ၍ တစ်ဖက်တစ်လမ်း ကူညီခြင်းပင်။…Continue
Pink Ribbon From Soe Hein Red Ribbon From အာကာမင်းမင်း
Khine Han Ni Myint@scarlet annie's Page
မရောက်တာတာ တော်တော်ကြာသွားပြီ တင်ထားတဲ့ discussions လေးအားပေးကြပါဦး အစ်ကိုတစ်ယောက်ဆီက ရှယ်ထားတာပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
At 10:56 on October 31, 2011, Soe Thiha said…
At 22:33 on October 29, 2011, အလင်းရောင် said…
At 16:46 on October 20, 2011, Thaw Zin Oo said…
:) nice story !! thanks sis :)
At 15:09 on July 24, 2011, Myo Myint Kyaw said…
Professional Identity အ ကြောင်း ကို ထပ်ပြီး ရှင်း ပြပေးထားပါတယ် ကျနေ်ာရေးတာ မပြည့်စုံသွားတဲ့အတွက်ပါ။
At 3:47pm on June 08, 2011, Soe Hein gave Khine Han Ni Myint@scarlet annieagift…
At 10:04 on May 27, 2011, Soe Thiha said…
Haveanice day friend....!!!
At 19:27 on April 23, 2011, Soe Thiha said…
At 1:59 on April 1, 2011, jonfaruk said…
At 19:54 on March 22, 2011, nay thwe said…
At 1:19 on March 9, 2011, komin said…
ကျွန်တော်အမည်က ကိုမင်းပါခင်ဗျာ တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်.....
ကိုမင်း သယ်ရင်းကို add ထားပါတယ်ခင်ဗျာ